सामान्य प्रश्नहरु - Liaocheng Lixin असर कं, लिमिटेड
हामी तपाइँको सोधपुछ, सामान्यतया २४ घण्टा भित्र प्राप्त गरे पछि।
के म तपाइँको कम्पनी बाट परीक्षण को लागी नि: शुल्क नमूना प्राप्त गर्न सक्छु?
हो, मानक नमूना र उच्च मूल्य उपलब्ध छैन।
तपाइँ कसरी गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ?
हामी गुणस्तरीय प्रमाणपत्र छ; वा तपाइँ अर्डर गर्नु भन्दा पहिले हामी तपाइँलाई केहि नमूनाहरु पठाउन सक्छौं। यदि तपाइँ हाम्रा उत्पादनहरु मा रुचि राख्नुहुन्छ, तपाइँ धेरै हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न को लागी स्वागत गरिनेछ।
तपाइँ कसरी वितरण समय ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ?
हामीसँग धेरै स्थिर आपूर्तिकर्ताहरु छन् जो हाम्रो लागी धेरै बर्षहरु को लागी उत्पादन गर्दछन्, जसले सुनिश्चित गर्न सक्छ कि वितरण समय तपाइँको आवश्यक समय भन्दा पहिले छ। यदि तपाइँको आवश्यकता हाम्रो स्टक फिट हुन्छ, तपाइँको अर्डर सकेसम्म चाँडो भेटिन्छ।
तपाइँको भुक्तानी को शर्तहरु के हो?
एल/सी वा टी/टी स्वीकार्य हुन सक्छ। टी/टी को लागी, कम से कम ५०% निक्षेप पहिलो सहयोग को लागी तिर्नु पर्छ।
तपाइँको ढुवानी विधि के हो?
1) 45 किलो भन्दा कम: DHL TNT Fedex यूपीएस एक्सप्रेस राम्रो हुनेछ (4-7 दिन तपाइँको ठेगानामा डेलिभर);
२) ४५ देखि २०० केजी को बीचमा: एयर ट्रान्स्पोर्टेशन राम्रो हुनेछ (५-१४ दिन तपाइँको एयरपोर्टमा डेलिभर);
3) 200 किलो भन्दा बढी: समुद्री यातायात राम्रो हुनेछ (सस्तो, तपाइँको पोर्ट को लागी 18-45 दिन)।
H65 पीतल बल, पीतल बल जाँच वाल्व, H62 पीतल बल, पीतल बल, शुद्ध ठोस कपर बल, सानो कपर बलहरु,